ဌာနချုပ်မှ တော်လှန်ရေးသိပံ္ပစွမ်းရည်ဟာ စိတ်တူသ ဘောတူဖြစ်တဲံ့နိင် ငံ ရေး သ ဘောတရားမဟုတ်ပါဘူး | LLCO - အလင်းရောင် ကို ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသော ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့အစည်း
အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူရဲ့ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ ဟာ ထိန်းကျောင်းပေးခြင်းကိုခံရပါတယ် မက်စ်ဝါဒီဟာပထမဆုံးပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပြီး
အဲဒါဟာအလုံးစုံ တော်လှန် ရေးရဲံ ဆန်းစစ်မှုကို သိပံ္ပပညာကိုအားဖြည့်ပေးပြီး
ကွန်မြူနစ် ဝါဒကို ရောက် ရှိအောင် ဖြစ်ပါတယ် မက်စ် လီနင် ဝါဒီဟာ နောက်ထပ်ချိုးဖျက်မှုတစ်ခုပါ မက်စ်ဝါဒီ
လီနင် ဝါဒီ ဟာ ထိန်းသိမ်းထားတဲံ့ပစ္စည်းမဲ့တော်လှန် ရေးရဲ့
အစလှိုင်းလုံးရဲ့ ယူနီဗာဆယ်သင် ခန်းစာများကို ပေါင်းစည်းထားခဲ့ပါတယ် အထူးသဖြင့် လီနင် ဦးဆောင် ခဲ့တဲ့ ဗော်ရှီဗစ်တော်လှန် ရေးဖြစ်ပါတယ် မော့်ရဲ့ထုတ် ဝေမှုသို့မဟုတ်
မက်စ်ဝါဒီလီနင် ဝါဒီ မော့်ဆက် ဝါဒီဟာ နောက်ထပ်
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဟာ အ ကောင်းမွန်ဆုံး
တော်လှန် ရေးသမိုင်းရဲ့တော်လှန် ရေးပေါင်းစည်းမှုကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်အချိန်တစ်ခုအတွက်
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံရှိတဲ့တရုတ်ပြည်မှာ မော့ဆကိ တွေနဲ့ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲံကမ္ဘာကိုတည်ဆောက် ဖို့ ရန် ကြိုးပမ်းမှုဟာများစွာအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ် မော့်ရဲ့
အ တွေးအ ခေါ်တွေဟာတော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့ အမြင့် ဆုံးပေါင်းစည်းမှုကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သောအခါ ကွန်မြူနစ် တွေဟာဌာနချုပ်မှ မော်စီတုန်းရဲ့ အ တွေးအ ခေါ်ကို နိင် ငံရေးဆောင် ပုဒ်လိုတိုးမြှင့် ခဲံ့ပါတယ် ကြာပြီးသောအခါအဲဒါဟာ ဌာနချုပ်မှ
မော့်စ်ဝါဒီဖြစ်လာပါတယ် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန် ရေးစတင် ကတည်းက အဲဒါဟာနစ် ရာစု
တစ်ဝက်နီးပါးကြာမြင့် ခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးမော့ဆက် ချိုးဖျက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် အဲဒီလူတွေမလာခင် မတိုင် ခင် က မော့ဆက်များပါဝင် ပြီးကောင်းမွန် တဲ့ အရာများကိုမော်ကွန်းထိုးနိင် ခဲ့ပြီး ဒါပေမယ့်လည်းတချို့အမှားတွေက်ု တော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အပို အ နေ နဲံကမ္ဘာကြီးဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ
နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေဟာ ခေတ်နဲ့မပြတ် အမှီလိုက် နေပြီးသူတို့ တွေရဲ့ ဖိနိပ်မှုပညာကို ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ် နေပါတယ်အလင်းရောင် ဆောင် ကျဥ်းပေးသူဟာ အ ဖြေဖြစ်ပါတယ် သိပံ္ပပညာဟာသင် ယူခဲံ့ပါပြီ အလင်းရောင်
ဆောင် ကျဥ်းပေးသူဟာ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာကိုအသစ်တစ်ခုဆီသ်ို့ အဆင့် လေးခုနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင် တိုးမြှင့် ခဲ့ပါတယ် အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူ ကွန်မြူနစ် ဝါဒဟာ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့ အမြင့် ဆုံးနဲံအဆင့် လေးဆင့် ရှိခဲ့ပါတယ် အဲဒါဟာ အခု ခတေ်
တော်လှန် ရေးအ တွေးအ ခေါ်ရဲ့ အထွတ်အထိပ်လည်းဖြစ်ပါတယ် အခုခေတ်မှာ ဌာနချုပ် အချက်အချာမှာ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာကို မထားရှိပါဘူး
တချို့လှုပိ ရှားမှုတွေဟာ စိတ်ခံစားမှုဝေါဟောရဖြစ် ပြီး ပွေ့ဖက်ထားပါတယ်
တချို့လှုပ် ရှားမှုတွေဟာ အဓိကအချက် အချာ ရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ကို သိပံ္ပဟာ ဆန့်ကျင် ခြင်းနဲ့ အသ်ိဉာဏ် ဝါဒီဆန့်ကျင် ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါတယ် မြောက်များလှစွာသော လှုပ် ရှားမှုတွေဟာ
စင် တူ သ ဘောဖြစ်ခြင်းမှာ အ ခြေခံခဲ့ကြပါတယ် မြောက်များလှစွာသော
လှုပိ ရှားမှုတွေဟာ စင် တူ သ ဘောတူခြငးမှာ အ ခြေခံခဲ့ကြပါတယ်
မြောက်များစွာလူတွေခေါ်ေ ဝ်ါနေ တဲ့မက်စ်ါဒီဟာ တော်လှန်ရေးသိပံ္ပပညာကို အ ပေါ်ကိုဆုပ်ကိုင် ထားတယ်လို့ အခိုင် အမာ ပြောဆိုကြပါတယ် ဒါပေမယ့် အနည်းငယ်သာ
အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ကြတာကို အရင်း ရှင် ဝါဒီတွေဟာ သူတို့တွေရဲ့ကွန်မြူနစ် ဝါဒီဆန့်ကျင် ခြင်းမှ အောင် မြင် မှု တွေ ရရှိခဲ့ကြပြီး အဲဒါဟာ မြောက်များလှစွာသော
ကောင်းမွန်တဲ့နလုံးသားရှိတဲ့ မွေူကင်းစ က လေးငယ်များဟာ တော် ရုံတန် ရုံ သိပံ္ပပညာဆိုင် ရာ တော်လှန် ရေးတွေးတောခြင်းရဲံ နစ် ရာစုနစ်ခု ရဲ့ အလည် သ ဘောပေါင်းနစ်ခု မျှ ရုံသာရှိပြီး
အဲဒါဟာ မတိုင် ခင် က လာပြီးခဲ့ပြီး စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းဖြန့်ကျက် ထားခဲ့ပြီး
အခိုင် အမာ ပြောဆိုခြင်းဟာ အခု ခေတ် ရုပ ဗေဒပညာ ရှင် တစ် ယောက်ဖြစ်လာနေပါပြီ ဒါပေမယ့်အိုင် စတိုင်းနဲံ နျူတမ် အ ကြောင်းကိုဘာတစ်ခုမှမသိ တာတော့မဟုတ်ပါဘူး အဲဒါဟာတော်လှန် မှုဖြစ်လာစေဖို့ ပြောဆ်ုဖို့ရန် များစွာ ရှိပြီး
ဒါပေမယ့် မက်စ်လီနင် မော်တို့ ရဲ့ အ ကြောင်း
ဘာမှ နောက်ထပ်သိဖို့ ရန် မရှိတော့ပါဘူး
တုံ့ပြန်မှုတွေဟာ ကွန်မြူနစ်လှုပ် ရှားမှု အ မြောက်အများကို ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာများစွာ အောင် မြင် ခဲ့ပါတယ် ဘားကိုမြှင့်တင် ဖို့ ရန် စာမေးပွဲဟာ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် မှုတွေ အ ပေါ်မှာတည် ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာ တော်လှန် ရေးရဲ့နောက်ထပ် လှိုင်းတစ်လုံးကို အသက် သွင်းနေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်မြူနစ် ဝါဒဆီသို့ဒီထက်ပို၍ သွားမည်ဆိုလျှင်
အတိတ်ကိုပါနားလည်ထားရမယ် ကျွန်တေ်ာ်တို့ရဲ့ ဗဟိုမှ အဆန်းသစ်ဆုံးပြုပြင် ထားတဲံ့
တော်လှန် ရေးသ်ိပံ္ပပညာကို ထားရမယ်
ဒါပေမယ့် စိတ် သ ဘောထားတူညီခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး
ဒီနေ ရာမှာဒီအချက် တွေကို တွေးတောဖို့ ရန်ဖြစ်ပါတယ်
(၁) သိပံ္ပပညာသာလျှင် ရှပ်ထွေးသောပြသာနာများကို ဖြေရှင်းနိင် ပါတယ် တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့ ပစ်ပယ်မှုဟာ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုစွမ်းအင် နဲ့
ဆင်းရဲမွဲတေ မှုရဲ့ ပြသာနာများကိုဖြေ ရှင်းဖြိ့ ရန် သူတို့တွေရဲ့ စွမ်းအင် နဲ ဆင်းရဲမွဲတေ မှု ရဲံ့ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ ရန် သူတို့တွေ ရဲ့အင် အားတွေနဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက် မှုရဲ့ပတ် ဝန်းကျင် ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စသည်တို့ကို
ဖျက်ဆီးပါတယ် အဲဒီဟာတွေဟာ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာကို တိုက်ခိုက် ပြီးဖိနိပ် မှုတွေက်ို ကူညီတာသက် သက် ဖြစ်ပါတယ်
(၂) အဲဒီဟာတွေဟာ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာကိုဆန့်ကျင် ပြီးစွန့်လွှတ် စွန့်စားမှု ရဲ့ အရာကြိုးစားမှုတို့ကို အဖျက် အ မှောင့်လုပ် ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် လွတ်မြောက်ဖို့ ရန် ဖိနိပ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီအဖျက် အ မှောင့်လုပ်ငန်းက တော်လှန် ရေးကိုဖျက်ဆီးပါတယ် အဲဒီအဖျက် အ မှောင့်ဟာ တတိယကမ္ဘာရဲလွတ်မြောက် မှုကိုဖျက် ဆီးပစ်ပါတယ်အဲဒီအဖျက် အဆီးလုပ်ငန်းဟာ အမျိုးသားရေးလွတ်မြောက် မှုကိုဟန့်တားပါတယ် အဖျက် အ မှောင့်လုပ်ငန်းဟာ တော်လှန် ရေးဦးဆောင် မှုကို ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ဖျက်ဆီးပါတယ်
အဲဒါဟာဖိနိပ် မှုများနဲ့  စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုများနဲံသူတို့ တွေရဲအင် အားတွေကြား အသိဉာဏ် ရှိမှုကို ဆန့်ကျင် ဖို့ရန် အ ခြေ အ နေကိုဖန်တီးပါတယ် အဲဒါဟာလျစ်လျူရှုမှုရဲ့  သူတော်ကောင်းတရားကို အပြင် သို့ထွက် စေခဲံပြီးဖိနိပ်သူများဟာ ဖိနိပ်မှုတွေရဲ ရောက်လုအပြီးမှာ အစွံထုတ်ဖို့ ရန်ဖြစ်ပါတယ်
နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေကဲ့သို့အပြင် ဘက်သို့လေ့လာခြင်းဟာ စွန့်လွှတ်စွန့်စားခြင်းနဲံ ဖိနိပ်ခံ ရမှုကို မစဉ်းစားဖို့ ရန် မသင် ယူဖို့ ရန် သူတို့ဘာသာပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုကို သင် ကြားပေးပါတယ်အဲဒီဘာသာဟာ ဘားကိုပိုမိုနိမ့်ကျ စေပါတယ် အဲဒါဟာတော်လှန် ရေးဦးဆောင် မှုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နောင့်ယှက် ခဲ့ပါတယ်
ဒြပ်ထုတွေရဲ့စွမ်းဆောင် ရည်ကု သူတို့တွေပိုင် တဲံ့ကံကြမ္မာ ရဲ့ အရှင် သခင် ဖြစ်သွားမှာက်ုဖျက်ဆီးပါတယ် အဲဒါဟာတစ်ဖက်သတ်စည်းမျဉ်းရဲံ တစ်စုံတစ်ခုကို
ထုတ်လုပ် နိင် စွမ်းဖြစ်ပွားလာမှုက်ု ဒြပ်ထုတွေက်ုတားဆီးပါတယ် အဲလိုအပြင် ဘက်သို့လေ့လာကြည့်ရှုမှုဟာရာသီဥတု
လူကြိုက်များမှု အ နေအထားဆက် သွယ်မှုများ ဓ လေ့များရှိတဲ့ နေ ရာများရှိတဲ့ 
အ ခြေ အ နေတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး ဗဟိုမှာထားရှိ မှာပါ အဲဒါဟာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုနဲ့
အ ခြေ အ နေတစ်ခုပါ အဲဒါဟာဒြပ်ထုတွေကို
စွမ်းအင် လျော့ကျ စေပါတယ် အဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒနဲံကွန်မြူနစ် ဝါဒသို့ချီတက် နေတဲံ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုက်ိုတားဆီးနေပါတယ်
(၃)တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာဟာ ဥ ရောပ အ ခြေစိုက်ဖြစ်ပြီးအဲဒါဟာ ဥရောပတိုက် သားတွေကိုတိုးတက်စေပြီး သိပံ္ပပညာကို
နားလည်ထားကြတယ်ဆိုအခိုင် အမာ ပြောဆိုမှုတစ်ခုပါ တော်လှန် ရေးသ်ိပံ္ပပညာဟာ
ဥ ရောပတိုက်သားမဟုတ်ပါဘူးတော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာဟာ အဖြူရောင် မဟုတ်ပါဘူး
အချက်အလက်များအရ မက်စ်မတိုင် ခင် ကတည်းက ကမ္ဘာ့တော်လှန် ရေးဟာ အ ရှေ့ အရပ်မှ ရွေ့လျားခဲံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောက် နေ့ စွမ်းအင် ရဲံကြီးမားမှုဟာ အ နောက်တိုင်းမှာ မသိမ်းပိုက် ထားပါဘူး ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ် လူသားတိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ များပြားလှစွာသော အဆင့် တွေအရ သိပံ္ပပညာနဲ နည်းပညာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေပါတယ်
သိပံ္ပပညာ တော်လှန် ရေးးအတွင်းအရင်းရှင် ဝါဒီတွေရဲ့ ဥ ရောပ ခေတ်မှာ စတင် ပြီးသူတို့တွေက်ို ကူညီခဲ့ပါတယ် တခြားယဉ် ကျေးသောလူမျိုးများ အစု အ ဝေးမှာကျန်ခဲံသောနစ် ထောင် ပေါင်းများစွာ
နဲ့ ရာပေါင်းများစွာ နောက်ပြန်ဆုတ်မှု ကိုသိပံ္ပနည်းပညာဆိုင် ရာယဉ် ကျေးမှုများရှိပါတယ် ရှပ် ထွေးသော လူမှုအဖွဲံအစည်းတိုင်းဟာ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့
သိပံ္ပပညာယဉ် ကျေးမှု ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲံ့ပါပြီ တရုတ်ပြည် အိန္ဒိယ
အ ရှေ့အလယ်ပိုင်း အ ရှေ့အာဖရိက
အ မေရိက ဥ ရောပ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာကို လျစ်လျူရှုမှုဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီ
တွေ ရဲ့နိင် ငံတကာ အ ထွေထွေ ဖြစ်ပြီး
ဖိနိပ်ခံလူတွေကို သိပံ္ပပညာကိုနားလည်ဖို့ ရန်
ရှေးကျေ စပြီး လျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ် လူတွေဟာသိပံ္ပပညာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး
ဒြပ်ထုများကို အကျိုးယုတ် စေဖို့ ရန်ပြုလုပ်ပါတယ်
(၄) ထပ်တူကျခြင်းကို သိပံ္ပပညာအ ပေါ်မှာ
ထားဖို့ ရန် အမျိုးသားရေးဆိုင် ရာလွတ်မြောက်မှုကို အကျိုးယုတ် စေ သော
အပြုအမူတစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ် အဲဒါဟာ ဘားရဲ့အဆငိ့ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကျဆင်း ရုံသာမက စွမ်းအင် ကျဆငိးခြင်း
ဒြပ်ထုများနဲ့ တော်လှန် ရေးဦးဆောင် မှုကိုပိုမိုအားနည်းစေပြီး အဲဒါဟာ နားလည်သူစွမ်းအင် ကိုလုပ်ပိုင် ခွင့် အာဏာလွဲပြောင်းပေးပြီး ထပ်တူကျခြင်းကိုသုံးပြီး
ဒြပ်ထုတွေကိုပြုပြင် ခြင်းဝါဒီ ရဲ့အဆုံးသတ်မှုကို ချီတက်ဖို့ ကို ကြိုးကိုင် နယ်ချဲ့ဝါဒီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဟာ ပထမကမ္ဘာသားတွေအမြင် မှာ အမျိုးသားယောကျာ်းတွေနဲ့တန်းတူအခွင့် အ ရေးရလို သောတော်လှန် ရေးအမျိုးသမီးဝါဒီ တွေကဲံသို့အဲဒါကို မိုင်းချထားခဲံပါတယ် အဲဒီထပ်တူကျနိင် ငံ ရေးသ ဘောတရားဟာ ပထမကမ္ဘာဟာ စင် ပေါ်သို့ ရောက် ရှိလာတာဟာ မ တော်တဆမှု မရှိပါဘူး အဲဒါဟာဒီမို ကရက်တစ်ဝါဒီ လွတ်မြာက် မှုတပ်များ ဆို ရှယ်ဒီမို က ရေစီ နဲ့ တတ် ယောင် ကားအသိပညာများတတ် ယောင် ကားတော်လှန် ရေးအကယ်ဒမီများ
တခြားတွေရဲံ့  ဘာသာတစ်ခုပါ ထပ်တူကျ နိင် ငံ ရေး သ ဘောတရားများဟာ ကျယ်ပြန့်စွာ
အစိုးရတိုင်းအထူးသဖြင့် စည်ပင် အစိုးရနဲံ
အမြတ်ကြီးစားမဟုတ်တဲ့ အတိုင်းမှာ အားပေးခဲ့ပါတယ် အဲဒါဟာ အတု အ ယောင် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီဖ်ြစပြီး ဒြပ်ထုအားကို မြှုပ်ပစ်ဖို့ ရန် ဖြစ်ပါတယ် နိင် ငံ ရေးလိုင်းတစ်ခုဟာ ထပ်တူကျပြီးဒါမှမဟုတ် ကိုယ် ရေးကိုယ်တာ
မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပို်င် သူကိုယ်တိုင် ထုပ်ပိုးခြင်းနဲံ မရပ်တည် နိင် လျှင် အဲဒီလိုင်းနဲံပတ်သက်ပြီး ဘာပြော မှာလဲ?
(၅) ထပ်တူကျခြင်းနိင် ငံ ရေးသ ဘောတရားဟာမျက်ကန်းမျိုးချစ်ဝါဒကိုအ ဖြေတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူးမျက်ကန်းမျိုးချစ် ဝါဒသို့
အ ဖြေ ပေးရန်နည်းလမ်းဟာ ဒြပိထုများကိုစွမ်းအားလျော့နည်းစေရန်
ဒါပေမယ့်သူတို့ တွေကို တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာနဲံ လုပ်ပိုင် ခွင့် အာဏာပေးဖို့ ရန်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဟာ ဒြပ်ထုများနဲ့တော်လှန် ရေးခေါင်းဆောင် များကိုစစ်မှန် သောကိရိယာ ပေးပြီးသူတို့တွေက်ုသူတို့ကိုယ်တိုင် လွတ်မြောက်ဖို့ ရန် လိုအပ်ပြီး သူတို့တွေ ပြုပြင် ခြင်းအတွင်းသူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ရန် လိုအပ် တဲံပစ္စည်းများမဟုတ်ပါဘူး အကြ်ုသိပံ္ပပညာဆိုင် ရာနဲံသီးခြားဝါဒီ အ ရှေ့တိုင်းစနစ်တွေက်ိုပေးနေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်
(၆) ထပ်တူကျသောနိင် ငံရေးမူဝါဒနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒီများဟာတတိယကမ္ဘာထဲမှာ အမျိုးသားရေးဖိနိပ်မှုနဲ့ မိသားစုချင်းသတ်ဖြတ် နေ သောစစ်ပွဲက်ို ဦးဆောင် ရမှာပါ စစ် ရဲ့ အကျဉ်းမြောင်းဆုံးကဲ့သ်ို့ ဒြပ်ထုများကိုခွဲခြားနိင် ပါတယ် သိပံ္ပပညာ သာလျှင် ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည် ပေါင်းစည်းနိင် ပါတယ် အမှန်တကယ်မှာသိပံ္ပပညာဟာအမြစ်တွဲခဲ့ပါပြီ
(၇) ထပ်တူကျခြင်းနိင် ငံရေးသ ဘောတရားအထူးသဖြင့် ပထမကမ္ဘာမှာ
အဲဒါဟာမျက်ကန်းမျိုးချစ် ဝါဒီရဲံပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဟာပထမကမ္ဘာ အမျိုးသားရေးဝါဒီများကိုဆန့်ကျင် တဲ့တတိယကမ္ဘာ လွတ်မြောက်ခြင်းကို
လုပ်ပိုင် ခွင့်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ပထမကမ္ဘာရဲ့ထွက် ပေါက် မရှိသောအစိုးရ ရဲ့ရုန်းကန်လှုပ် ရှားခြင်းကို ထောက် ပံ့သင့် တဲံ့အချိန် တွင်
ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ တတိယကမ္ဘာရဲ့အမျိုးစရိုက် နဲ့မလုပ်သင့်ပါဘူး ကျွန်တော်တ်ု့တွေဟာ ပထမကမ္ဘာရဲ့ ထွက် ပေါက် မရှိသော
အစိုးရ တွေရဲ့ တတိယကမ္ဘာရဲ့ စရိတ်ခ တွေနဲ့ တစ်ဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းက်ုမ ထောက် ပံ့သင့်ပါဘူးတော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာနဲ့ပထမကမ္ဘာ နိင် ငံရေးမူဝါဒများကို တိုက်ခိုက် ဖို့ရန် ရိုးရှင်းစွာ
ပထမကမ္ဘာသားများရဲ့ ရုပ်ဖျကိ မှုနဲ့တခြားပုံစံဆိုတာ ရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပါတယ်
(၈) အ တွေးအ ခေါ်ဝါဒဟာလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကလိမ်ကျခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့အ တွေးအ ခေါ်တွေဟာ
ဇွန်းဖြစ်ပါတယ် တချို့အ တွေးအ ခေါ်တွေဟာဓားတွေဖြစ်ပါတယ် တချို့ အ တွေးအ ခေါ်တွေဟာအုတ်ခဲတွေဖြစ်ပါတယ်
တချို့က သေနတ်တွေဖြစ်ပါတယ် အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူကွန်မြူနစ် ဝါဒ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့အမြင့်ဆုံးပုံစံ ခေတ်မှီအောင်
ဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာဟိုက်ဒရိုဂျင် ဗုံးတစ်ခုပါ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တတိယကမ္ဘာလွတ်လပ်တာကိုလိုချင် လျှင်
ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်မြူနစ် ဝါဒကိုလိုချင် လျှင် ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာ စွန့်လွှတ်စွန့််စားမှုနဲ့ ဖိနိပ်ထားခံရ သော ဘဝကို
အပြင်းထန်ဆုံး ရ ရှိနိင် သောလက်နက် တွေနဲံ့
လက်နက် တပ်ဆင် ပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဟာ
ဖိနိပ်ချုပ်ချယ် မှုအဆုံးသတ်ကိုလိုချင် လျှင် တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူနောက်ကိုလိုက် ရပါမယ်
ဘာက လူသားဆန် မှုနဲ့အတူ ပေါင်းစည်းနိင် မှာလဲ?
(၉)တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာဟာ တရားသေဝါဒမဟုတ်ပါဘူးတခြားပိုမိုအစွမ်းထက် တဲံ့ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာစနစ်ဟာ
ရ ရှိနိင် လာလျှင် ထို့ နောက် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီဒြပ်ထုတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင် ထားပါတယ်
တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့ စတုထ္တအဆင့် က သာလွန်ခြင်းကို ရ ရှိပါလျှင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့တာဝန်သိစိတ်ဟာ ပဉ္စမ အဆင့်ကို ပွေ့ဖက်ဖို့ ရန် ဖြစ်ပါတယ် လူတွေဟာအလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူကွန်မြူနစ် ဝါဒထက် သာလွန်ပြီးလိုချင် လျှင် သူတို့တွေဟာ လိုအပ်တဲ စစ်မှန် သောအလုပ်အကိုင် ကို
သိပံ္ပပညာပြန်လည် ဆန်းသစ်ဖို့ ရန် ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဆက်စပ်မှုဝါဒ ဘုရားတရားမဲ့ဝါဒ ခေတ် ရေစီးကြောင်းတော်လှန် ရေးလှုပ် ရှားမှုထပ်တူညီသောနိင် ငံရေးမူဝါဒနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကားအသ်ပညာ ဝါဒကို နောက် ပြန်ဆုတ်ခြင်းဟာ ဖိနိပ်ခံရသူနဲံ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုတို့မတူညီပါဘူးလူတွေဟာ
သူတို့တွေ ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင် ရာ ပုံပြင် တွေနဲ့ အတ္တမာနတွေက်ို ကျော်လွန်ဖို့ ရန်လိုအပ်ပါတယ် လူတွေကိ်ုခစားပါ
တတိယကမ္ဘာကိုကယ်တင် ပါ လူသားဆန် မှုကို ကယ် တင် ပါ
(၁၀)ဌာနချုပ်ဗဟိုမှာသိပံ္ပပညာထက်ဘယ်အရာမဆ်ုထားရှိခြင်းဟာ လုံခြုံရေးစွန့်စားမှုနဲ့ထပ်တူကျသော နိင် ငံရေးဝါဒများဟာ လူတွေဟာထုတ်ဖော်ပြောဖို့ ရန်အားအင် တွေ ရှိခဲ့ပြီးအ ခြေ အ နေတစ်ခုကိုဖန်တီးပါတယ် အဲဒါဟာလူတွေကသူတို့တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင် ရာပုံပြင် နိင် ငံရေးလိုင်းကို ဆွေးနွေးတာထက် ပ်ိုတဲံ့အရာတွေက်ိုပြုလုပ်ဖ်ု့ ရန် အားအင် တွေ ရှိခဲ့တဲအ ခြေ အ နေတစ်ခုကိုဖန်တီးပါတယ်
လူတွေဟာထပ်တူကျခြင်းအ ပေါ်တခြားတစ်ဖက်က်ုစိန် ခေါ်မှုသာမက ရှိတဲံအ ခြေ အ နေတစ်ခုကိုအားပေးခဲ့ပြီးဒါပေမယ့်လူတိုင်းဟာ
သူတို့တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် တွေက်ုသူတို့တွေရဲ့သင့် တော်တဲံ့
အရည်အချင်းက်ုထုတ် ဝေဖို့ရန် မျှော်လင့် ခဲ့တဲံအ ခြေ အ နေကိုဖန်တီးပါတယ် နိင် ငံရေးမူဝါဒများဟာ
အသင့်ချတွေက်ုဆွေးနွေးခြင်းကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ အဲဒါဟာစွမ်းအင် တည် ဆောက်ဖို့ တွေဖြစ်ပါတယ် အဲဒါတွေသာမက ထပ်တူကျသောနိင် ငံရေးမူဝါဒများကိုအစ်ိုးရအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုစု ဆောင်းဖို့ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ပါတယ် အဲဒါဟာတက်ကြွသော စက်ဝိုင်းများကုိ
ထိုးဖောက် ဝင် ရောက် စေဖို့ရန် လွယ်ကူပါတယ် ထပ်တူကျသောနိင် ငံရးမူဝါဒဟာဝက် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
စတာလင် ရဲ့ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှ ပြောတဲံ့စကားတစ်ခု ရှိပါတယ် စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုနဲ့ ဖိနိပ်ခံ ရမှုများဟာ ကွန်မြူနစ် ဝါဒရဲ့ ကမ်းခြေမှ အတန်းအစားတစ်ခုရဲ့ လှေတစ်စီးဖြစ့် ပြီး ဒါမှမဟုတ် ကွန် မြူနစ် ခေါငိးဆောင် မှုမပါပါဘူး အဲဒါဟာမူမမှန် သော သမိုင်းရဲ့နည်းပညာကို ကြည့် ရှု ရှုမြင် မှုဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့တော်လှန် ရေးဟာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲမဖြစ် နိင် ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ရဲံတော်လှန် ရေးဟာ အက်တမ်များအဖြစ်ဆီသ်ုိ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မထုဆစ်နိင် ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ရဲ့တော်လှန် ရေးဟာကြယ် တွေရဲ့ ရှေ့ဖြစ် ဟောခြင်းကဲံသို့မဟုတ်ပါဘူး မော့်ဆက် တွေဟာ အဲဒါကိုစတင် မြင် ခဲံ့ပါပြီ သူတို့တွေဟာတော်လှန် ရေးဟာ ရှေ့သို့သာလျှင် သွားနိင် တာမဟုတ်ဘဲ နောက်ကို ပါ သွားနိင် တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါတယ်ဘယ်အရာက အတန်းအစားရဲ့ လှေငယ်ကို ထာဝရသံသရာထဲမှာ မှ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုနဲံ
ဖိနိပ် ခံရသူတွေက်ိုိ ရပ်တန့်ဖို့ရန် ဖြစ်မှာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ကို ရှေ့သို့ချီတက မှုကို ထိန်းညှိပေးမယ့် အရာတစ်ခုက တော့
သိပံ္ပပညာကို လိုက်ဖက် အောင် ပြင် ဆင် ပါ
အဲဒါကြောင့် အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူ တော်လှန် ရေးရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုကို ခံရပါမယ် ဗဟိုမှာအလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူရှိပါတယ် ဗဟိုမှာတော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ ပါ အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူနောက်ကိုလိုက်ပါ အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူအဖြစ်ခံယူပါ မှေးမှိန်တဲံ့ မီးလုံးအဖြစ် မခံပါနဲံ
← စိတ် သ ဘောထားကြီးခြင်းဟာ အနိင် ယူမှုများနဲံနှစ်တစ်နစ် ဖြစ် အောင် ပြု လုပိပါလိမ့်မယ်
ဂိတ်များမှအမျိုးသမီး စတာလင် ရဲ့ ရုရှားမှလိင် နဲံ့ စက်မှုလုပ်ငန်း Cambridge တက္ကသိုလ်မှ ပုံနိပ်ခြင်း USA 2002 →